NYI LYNN SECK 18+ DEN: ထူးခြားအေးမြသည့် လ၏ ပုံရိပ်လွှာ ဆိုပဲ
Posted by NLS at 5/17/2010 11:26:00 PM
21 Responses to “ထူးခြားအေးမြသည့် လ၏ ပုံရိပ်လွှာ ဆိုပဲ”
ဝါသနာတူသမို့ လင့်ခ်လေး တစ်ချက်တို့လိုက်ပါတယ်။ ကြော်ငြာ ဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ အမြင်ကို ထပ်ဆင့် ဖော်ပြတာသာ ဖြစ်ပါတယ် ကိုလင်းဆက်ရေ..။
ပြောပြီးကာမှ လင့်ခ်ကျန်ခဲ့တယ် ဆောရီးဗျာ http://www.younggun.co.cc/2010/05/blog-post_17.html
ဟုတ် ဖတ်ပြီးပြီ ကိုရမ်းဂန်း။ ဘဲလားလေဘာတီဆိုတာ ဟိုတုန်းက နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာ တစ်ယောက်ပဲဗျ။ မှန်ပာတယ်။ သူပြောတာလည်း။
ထူးဆန်းတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီလို ဖောက်တာ ဒီတစ်ခာ ထူးခြားတယ်လို့ ထင်မိတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ စဖောက်တာကို သိလိုက်တဲ့သူ အတှောနည်းတယ်။ လင်းတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်နေတာကိုး။ ပြန်ထွက်လာတော့ ခုနစ်နာရီ။ ခွန်ခွဲလောက်ကြတော့ အတှောဝေးသွားရော။ တချို့ဆို သိတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ထားပာတော့။ ကျွန်တှော ဆက်မရေးချင်တော့ဘူး။ ကျွန်တှောက ဒာတွေ သိပ်မယုံတတ်ပာဘူး။ ဒာပေမယ့် ဒာလေးကတော့ ထူးခြားသလား ထင်မိသဗျ။ အဂဿငဝိဇဿဇာလိုပော့ဗျာ။ ရုတ်တရက် မြင်ကြား လိုက်ရတာလေး တစ်ခုမှာ တစ်ချို့လည်း ရုတ်ချည်း ကောက်ချက် ချကြတာပော့။ ကျွန်တှောလည်း ထို့အတူ။
တကယ်တမ်းကတော့ လနဲ့ ကမဿဘာနဲ့ သောကြာဂြိုဟ်နဲ့က အဝေးကြီးတွေပာ။ သောကြာဂြိုဟ်နဲ့က ပိုလို့တောင် ဝေးသေးတယ်။ ဒာပေမယ့် ဒီလို မျက်မြင်တွေ့ရတဲ့ အရာတွေပှောမှာ အခြေခံပြီး နကဿခတ်တွေကိုလည်း တွက်ချက် ကြရတာပာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ သောကြာကြယ်ကြီး လနဲ့နီး ပြည်ကြီး ပျက်လတဿတံ့ ဆိုတဲ့ တဘောင်က သိပ်ခေတ်စားပာတယ်။ ဒာပေမယ့် ဒာက သိပ်ပြီး ဗရမ်းဗတာနိုင်တဲ့ တဘောင်ကြီးပာ။ ဖြတ်တဲ့ကာလ၊ ဖြတ်တဲ့နေရာ၊ ဖြတ်သန်းပုံ စတဲ့ဟာတွေကိုလည်း ထည့်ပြီး တွက်ချက်သင့်တယ်လို့ ထင်ပာတယ်။
အဲဒီအချိန်က လနဲ့ သောကြာဂြိုဟ်ဟာ မိဂသီနကဿခတ်၊ အဒြနကဿခတ်၊ ပြိသဿသရာသီခွင်က ရောဟနီနကဿခတ်၊ မေထုန်ရာသီခွင်က ပုဏဿဏဖုသျှနကဿခတ် တို့ရဲ့ ကြားထဲကို ရောက်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပာတယ်။ မိဂသီက ဟံသာဝတီ (ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ) ကို ကိုယ်စားပြုပာတယ်။ အဒြကတော့ ထားဝယ် တခွင်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ရောဟဏီက သီဟိုဠ်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ပုဏဿဏဖုသျှက ကတူး တွေကို ကိုယ်စားပြုတယ် ဆိုပာတယ်။ အနေအထားက မြန်မာ နကဿခတ်အလိုအရ ဆိုရင် ဟသဿငာတာရာထဲမှာ ဖြစ်နေပာတယ်။ မြန်မာ အလိုအရ ဟသဿငာတာရာဟာ ရောဟဏီနကဿခတ်၊ မိဂသီနကဿခတ်၊ အဒြနကဿခတ်တွေနဲ့ ယှဉ်တွဲ လှည့်လည်နေတာ ဖြစ်ပာတယ်။ တနဂဿငနွေနေ့မို့ ယွန်းလူမျိုးတို့အတွက် အတွက် ရည်ညွှန်းတယ် ဆိုတာကိုလည်း တွက်ရပာမယ်။
တွက်ချက်ပြီးမှတော့ဗျာ တင်လိုက်ပါ ညီလင်းဆက်ရေ..
ကျနော်တို့လည်း ဗဟုသုတ ရတာပေါ့ဗျာ။
ကြယ်က လ အနောက်နားကိုရောက်နေတယ်နော်. ဒီက မြင်ရတာ ကြယ်ကလအပေါ်မှာ ..အလည်တည့် တည့်လေးမှာ တွေ့တာ.. ချစ်စရာလေးမို့ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်မိတာ. အဆူခံရတယ်ဒီနေ့.. အဲဒီလို ဖြစ်တာ ဘာနမိတ်လဲဆိုတာသိလို့လား..ပျော်မနေနဲ့တဲ့..း((
အထက်က ကိုဇော်ပြောသလိုပါပဲ တင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်....ဗဟုသုတရအောင်လို့ပေါ့....:D
တခါမှ ကိုညီလင်းဆက်ဘလော့မှာ ကွန်မန့် မရေးဖူးပေမယ့် ဖတ်နေကျပါ....
ဟင်... တွက်ပြီးပြီဆို တင်လေ... သိချင်လို့ပါ။ ကိုညီလင်းဆက် တွက်ချက်ပြီး ရှင်းပြတာဆို ပိုနားလည်လွယ်မယ်ထင်တယ်။
စနဿဒကူး ကြယ်က လအပှောမှာ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မလဲဗျ။ သေချာ စဉ်းစားကြည့်ဦး။ လကမှ ကမဿဘာနဲ့ အနီးဆုံး။ ဒုကဿခ။
တွက်ပြီးသားဆို တင်စေချင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ ရအောင်ပေ့ါ..ရှင်းလဲ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်..နက္ခတ်တွေ ဘာတွေနဲ့ ပြောရင် နားမလည်မှာစိုးလို့ပါး)
ကိုလင်းဆက် ပိတ်သတ်တွေ တောင်းဆိုတာများနေပြီ.. လျှိုမထားနဲ့လေ... တွက်ပြီးရင်လဲ တင်ပါ.. ဒီမှာ ဖတ်မလို့ စောင့်နေရတာကို...
စိတ်ဝင်စားတယ်။ ထပ်တင်ပါ ကိုညီလင်းဆက်။ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့။
ကိုညီရေ တင်ပါဗျ။ တွက်ချက်ထားတာလေးတွေ။ အကယ်လို့ မှန်လာတော့လည်း ....
ဦးထွန်းလွင်ကြီးပြောတာ မုန်သုန်နောက်ကျမယ်ပြောတာပါ ဒီမိုးက မုန်သုန်မဟုတ်ပါဘူး ရေတွင်းရေကန်တွေရေပြည့်ဖို့အတွက်က မုန်သုန်မိုးရွာမှဖြစ်မှာပါ ဒီမိုးလောက်နဲ့ကတော့အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး
အတ်ာလေးကို သတိကြီးကြီးနဲ့ ရွေးချယ်ထားတာမှန်း
အင်း.... ဆင်ဆာ ဆင်ဆာ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လှပါတယ်.. သိပ်လှတဲ့ စကားလုံးလေးပါဘဲး)း)
အကိုတို့အမတို့ရေ သိပ်လဲမတင်ခိုင်းပါနဲ့ ကိုညီလင်း ဆိုက်ကနိုင်ငံရေးပြောတယ်ဖြစ်နေအုန်းမယ် ဗဟုတုသအနေနဲ့ဆို ကိုညီလင်းကိုတခြားနည်းနဲ့တောင်းကြပါ (ဥပမာ ဂျီမေးတို့ဘာတို့ပေါ့) ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲပါသွားမှာဆိုးလို့ပါ
ကျနော်သိချင်တာက ဒီလကို ကြယ်ဖောက်တာကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲကပဲ မြင်ရသလား..ဘေးကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတော့ မမြင်ရတော့ဘူးလား..ဟောကိန်းကရော သူတို.ကို အကျိုးမသက်ရောက်နိုင်ဘူးလား..(မြန်မာပြည်မှာလဲ အခုအပူလွန်ရေရှားအပါအ၀င် အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေတော့လေ).မိုးရွာတာကတော့ ဆိုင်ကလုံးလိုင်လာကြောင့်ပါ...မုန်သုံက လာကိုမလာသေးတာပါ...သတင်းစာကရေးတာကိုတော့ အကောင်းအအဆိုးမပြောချင်ဘူး..သူတို့လဲ သူတို့ ဘ၀အတွက်ရေးရမှာပါပဲ..ကိုယ်ချင်းစာပေးလိုက်ပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတော့ မြင့်မြင့်ပျံ ဝေးဝေးကြည့်ဖိုဲ့ ရှိပါတယ်..။ကို ညီလင်းဆက်ကို အားပေးလျက်ပါ..
I do appreciate the reporter and photographer Tin Soe who has given the hidden message to people under tight censorship.
That is their artistic mind.
ဘာမှမဟုတ်ဘူး ..သောကြာကြယ်ကြီး လ နဲ.နီးပြည်ကြီးပျက်လတံ. ဆိုတာတဘောင်ရှိတော.လူတွေကလဲ ကြောက်နေကြတယ်လေ..အစိုးရက ကောင်းတဲ.နမိတ်ပါဘာညာဝါဒဖြန်.ချီရေးပေါ.